Maninona no mila namboarina ny talantalana fampirantiana acrylic？
Ankehitriny na inona na inona indostria, mihombo hatrany ny fifaninanana amin'ny vokatra, raha tsy misy ny teknolojia fototra dia mora ny maka tahaka azy taloha. Ary tato ho ato dia mihabe sy mihabe ny vidin'ny vokatra ary mihamafy ny fifaninanana vokatra. Amin'ny fotoana maro, ahoana ny fomba hisarihana c ...
Inona avy ireo fahasamihafana misy eo amin'ny takelaka acrylic cast ary ny takelaka akrilika extruded?
Ny fahasamihafana misy eo amin'ny takelaka akrilika atsangana sy ny takelaka akrilika voafafa: 1, fanariana takelaka akrilika ao amin'ny mangarahara mihoatra ny 98%, ary ny takelaka akrilika avoaka mihoatra ny 92% ihany. 2, fanariana plastika akrilika tsy misy pitting, ary mangarahara be ny sisiny; Takelaka akrilika manaparitaka wil ...
Alohan'ny hiresahantsika ny fomba hahatakarana ny acrylic, ny acrylic dia ny fomba hamatorana azy, ny karazan-taratasy acrylic ary ny fahalalana matihanina momba ny acrylic. Androany, hampahafantariko anao indray "ny fomba hitazomana, ho lava ny fiainana serivisy amin'ny vokatra acrylic"? 1.Acrylic vokatra ...
Ny talantalana fampirantiana akrilika dia lasa malaza kokoa.
Amin'ity dingana ity, zavatra maro amin'ny fiainantsika isan'andro no ampiharina amin'ny talantalana fampirantiana acrylic. Ny talantalana fampisehoana divay acrylic mahazatra, talantalana fampisehoana kosmetika acrylic, rakotra fampiratiana hoditra, rakotra fampisehoana elektronika 3C, talantalana fampisehoana finday acrylic, sns .Nahoana ny talantalana fampirantiana acrylic ...
Nahoana isika no mila manamboatra baffle anti-spray akrilika amin'ny ankapobeny?
Tamin'ny fipoahan'ny COVID-19 tamin'ny taona 2019, ny fisian'ny baffle anti-droplet dia nanisy sosona fiarovana vaovao amin'ny famerenana ny asa sy ny famokarana amin'ny indostria isan-karazany. Ny baffle anti-foam dia miavaka amin'ny famaritana vokatra lehibe, amin'ny faritra fiarovana lehibe kokoa. Anti - foam ...
Inona avy ireo fepetra amin'ny fitahirizana vokatra akrilika?
Ny vokatra akrilika dia manana tombony maro Voalohany, ny fandefasana 92% ny vokatra akrilika dia mazava sy mangarahara ampy hampitana ny fahatsapana madio amin'ny mpanjifa sy hamongorana vokatra mendri-kaja. Faharoa, amin'ny vokatra indostrialy maoderina, ny akrilika mihitsy dia manana singa lamaody, ary safidy tsara indrindra amin'ny ...
Ahoana no tokony hisafidianantsika ny talantalana fampirantiana acrylic?
Ny talantalana fampirantiana akrilika dia manana tombony betsaka, fa raha misafidy tsy mety isika, dia hihena ny fiasan'ny fampiasana. Ka ahoana no tokony hisafidianantsika ny talantalana fampirantiana acrylic? 1.Matetika hatevin'ny akrilika dia iray amin'ireo fenitra handrefesana ny kalitao, satria ny fampiasana fitaovana samihafa, ny ...
Inona avy ireo toetra mampiavaka ny board acrylic?
Ny takelaka akrilika dia vita amin'ny methyl methyl oleic acid monomer polymerization, ny takelaka akrilika dia mizara ho sokajy roa: ny lovia fanariana sy ny takelaka extruding araka ny fizotry ny famokarana. Ny takelaka akrilika dia manana tantara lava, ary efa nalaza sy nampiasaina be. Ankehitriny dia betsaka ny pro acrylic ...
Fako akrilika, Boaty akrilika, Stand Acrylic Display, Asehoy Acrylic Stand, Asehoy Acrylic Stand, Asehoy acrylic,